ASA FANADIOVANA, TANTSOROKA HO AN’NY CU FIANARANTSOA – Région Haute Matsiatra
ASA FANADIOVANA, TANTSOROKA HO AN’NY CU FIANARANTSOA
Natomboka io maraina io ny fanadiovana ny tanànan’i Fianarantsoa renivohitra. Vonona ireo mpitatitra mivondrona ao amin’ny APTR-TUF-ACT amin’ny fitanterana ny fako, teo ihany koa ny fampitaovana sy ny tohana ara-bola avy tamin’ireo malala-tanana izay namaly ny antso nataon’ny Governoran’ny Faritra Mahatsiatra Ambony, Atoa Lova Paupil Razafindrafito.
Noho izany dia tsy volam-panjakana fa vokatry ny fifanomezan-tànana ao anatin’ny fifampitokisana no anatanterahana izao asa izao.
“Fihetsika mahate-hidera izao nataon’Atoa Governora izao ka mendrika hisaorana”, hoy ny Ben’ny Tanana mpisolo toerana, Atoa ANDRIAMANJATOHASA Jean Honoré. Maro, hoy izy, ny kaominina ato anatin’ny Faritra fa niangaram-pitiavana ny CU Fianarantsoa.
Olona 20 avy amin’ny fokontany, teknisianina vitsivitsy avy amin’ny kaominina sy olon-tsotra no manatanteraka ny asa sy ny fanaraha-maso. Natomboka tamin’ny Fokontany Sahalava sy Tanambao ny asa tamin’ity androany ity ka tsy hijanona raha tsy madio ireo fako eny an-dàlana, any anaty tatatra,sy ireo fako mivangongo manamaimbo tanàna manerana ny Fokontany dimampolo mandrafitra ny CU Fianarantsoa.
Hatolotra ny sefo fokontany ny tanàna madio fa kosa ho hentitra ny mpitondra (Faritra/kaominina) amin’ny tokony hikajiana sy hitazonana izany fahadiovana izany.
Forum Economique Régional du 27 au 29 Avril 2017
Fahombiazana ny Forum Economique Régional natao teto Fianarantsoa ny 27, 28, 29 avril 2017. Tratra...
rhm_119 mai 2017